Axmed Madoobe oo ka digay in dowladda Soomaaliya magacawdo maamul aan dadka deegaanka soo dooran – idalenews.com
Axmed Madoobe oo ka digay in dowladda Soomaaliya magacawdo maamul aan dadka deegaanka soo dooran
Gudoomiyaha Maamulka KMG ee Kismaayo ahna Hogaamiyaha Jabhada Raaskambooni Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay in dhowaan magaalada Kismaayo uu ka furmi doono shirka maamul u sameynta gobolada Jubooyinka.
Shir jaraa’id oo uu shalay ku qabtay magaalada Kismaayo ayuu sheegay in aanay aqbali doonin maamul aysan dadka deegaanka soo dooran in dowladda u soo magacawdo, isagoo cadeeyay inuu diyaar u yahay inay xilka ku wareejiyaan cidii dadka deegaanka soo doortaan.
“Maamul u sameynta Jubooyinka dowladda door bey ku leedahay, iyadaa mas’uul ka ah, laakiin waxaa ka digay maamul aan dadka deegaanka matalin in la soo magacaabo, anagana waxaa diyaar u nahay in cidii dadka deegaanka soo doortaan inaan xilka ku wareejino”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay shir gudoomin doonto shirweynaha maamul u sameynta ee dhowaan ka furmaya Kismaayo, isla markaana dadka deegaanka ay dooran doonaan cidii hogaamin laheyd.
Golaha Wasiirada ayaa dhowaan meel mariyay qorsho cusub oo ku saabsan maamul u sameynta gobolada dalka, gaar ahaan deegaanada laga saaray Shabaab, iyadoo qorshahan uu dhigayo in muddo lix bilood Maamul KMG loo sameeyo, kadibna loo gudbo shirweyne dadka deegaanka ku soo doortaan cidii matali laheyd.
Arrimaha maamul u sameynta Gobolada ayaa ah caqabada ugu weyn ee heysata dowladda, iyadoo dhowaan maamul KMG oo laga soo horjeestay u sameysay Gobolka Bay iyo degmada Baydhabo.
Faah faahin ka soo baxaya dagaal ka dhacay Gobolka Gedo
Ra’iisul Wasaare Saacid oo sheegay in Garooska uu ka madax banaan yahay hey’adaha dowladda